यसरी ल्याउन सकिन्छ २० लाख पर्यटक - नयाँपुल अनलाइन डटकम
प्रचण्ड मान श्रेष्ठ
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को लक्ष्यको रूपमा रहेको २० लाख पर्यटक भित्र्याउने कुरामा कुनै चिन्ता लिनु पर्ने म देख्दिन ।
अझै पनि ५ महिना बाँकी छ । खासमा अहिले पर्यटन बजारको ‘डेमोग्राफी चेञ्ज’ भएको छ । हिजोसम्म युरोप, जापान, नर्थ अमेरिका, अस्ट्रेलिया पर्यटनको उद्गमस्थल मानिन्थ्यो । अहिले आएर उनीहरूले चिनियाँ र भारतीयलाई आफ्नो ठाउँमा लगेर घुमाएका छन् । अहिले पर्यटनको उद्गमस्थल बजार चीन र भारतमा सरेको छ । चीन नम्बर एकमा छ अहिले चीनबाट नेपालमा एक/दुई लाख पर्यटक आइरहेका छन् । त्यसलाई दश लाख बनाउन कुनै गाह्रो छैन ।
त्यहाँबाट नेपाल पठाई रहेका १०/१५ वटा अपरेटर होलान् । त्यसलाई समातेर उनीहरूलाई के इन्सेन्टिभ दिनु पर्‍यो भनेर सोधे हुन्छ । त्यो पुरा गरेपछि डब्बल बनाउँछन्, त्यसका लागि उनीहरू आफैले काम गर्छन् । अझ पनि म भन्छु, २० लाख पुर्‍याउन गाह्रो छैन । तर मैले भन्न नसक्ने कुरा सम्बन्धित निकायहरूले त्यतातर्फ काम गरेको छ की छैन भन्ने चाहिँ हो । चीन र भारतलाई समात्ने हो भने कुनै गाह्रो छैन ।
म सन् २०११ को उदाहरण दिन्छु । त्यस बेला लक्ष्य पुर्‍याउन गाह्रो भएपछि भारतको पनि दिल्ली, मदरास, मुम्बई गएनौँ । उत्तर प्रदेश र विहारको सेकन्डरी सिटिज्मा गयौँ । हामी सानो सहर गयौँ । उनीहरूलाई अङ्ग्रेजी आउँदैन । पासपोर्ट बनाउन दिल्ली पुग्न सक्दैन । तर उनीहरूले कमाइसकेका छन् । सबै गाडी चढ्छन् ।
हामीले उनीहरूलाई टार्गेट गर्‍यौँ । हामीले लोकल एफएममा ‘गर्मी से बेहाल, चलो नेपाल’ भन्ने विज्ञापन बजायौँ । यसले पाँच लाखलाई त्यस क्षेत्रबाट नेपाल डोर्‍यायो । त्यो पाँच लाखको फिगर हाम्रो तथ्याङ्कमा आएन । किनभने तिनीहरू काठमाडौँ आएका होइनन् । आफै गाडी, आफै बस लिएर आएका हुन् । सप्ताहन्तमा उनीहरू कोही पाल्पा पुगे, कोही धनगढी पुगे होलान् ।
तर, त्यसलाई हामीले ट्र्याक गर्‍यौँ । कोही भारतीयले गाडी लिएर आयो भने हाम्रो कस्टममा रजिस्ट्रार गर्नुपर्ने हुन्छ । एक रात बसेको छ भने मतलब भएन । कति रात बस्यो भन्ने त्यहाँ रेकर्ड रहेछ । २० सिटको बस आएको छ पाँच दिनको पैसा तिरेको छ भने हामीले आधा जनाको मात्र हिसाब राख्यौ । हामीले त्यसरी हिसाब गर्दा चार महिनामा पाँच लाख मानिस आएको देखियो । त्यसैले २० लाख पुग्ला की नपुग्ला भनेर अलमलिनु पर्दैन । नजिकको छिमेकीहरू भारत र चीनलाई हेरे पुग्छ । चीनको अपरेटरलाई समात्नु पर्छ । भारतको त्यही उत्तरी क्षेत्रलाई समेट्यौँ र अलि अलि सहुलियत दिने हो भने मजाले २० लाख पर्यटक पुर्‍याउन सकिन्छ ।
पर्यटककै कुरा गर्दा खासमा भन्ने हो भने पर्यटकलाई न सरकारले आऊ भनेर, न व्यवसायीले आऊ भनेर आउने नै हुन् । हाम्रो पर्यटन व्यवसायीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच छैन । प्रचार गरेर आउँ छ की आउँदैन थाहा छैन । यसमा अहिले हाम्रोमा आइरहेका मध्ये विदेशका अपरेटरबाट कति आइरहेका छन् भन्ने हेर्नु पर्छ । अहिले झन्डै ५० प्रतिशत उनीहरूले पठाउँछन् । अव उनीहरूलाई समात्नु पर्छ । अहिले तिमीले ५० हजार पठाइरहेका छौ । अव डब्बल पठाउनु पर्‍यो । बरु हामीले तिमीलाई के गर्नु पर्‍यो? भनेर सोध्नु पर्‍यो । अव सम्बन्धित निकायले त्यस्तो ठाउँ पहिचान गर्नुपर्‍यो । बजार सीमित छन्, त्यहाँका अपरेटरलाई भन्नु पर्‍यो । बोलाउनु पर्‍यो र उनीहरूलाई सुविधा दिनु पर्‍यो ।
यो भ्रमण वर्ष किन भन्ने पनि प्रश्न आउला । हामीले १९९८ मा नेपाल भ्रमण वर्ष मनायौँ । यसको अर्थ त्यो भन्दा पछाडि पर्यटक नआउनु भनेको त होइन नि । यसरी कुनै वर्ष मनाउनुको अर्थ चाहिँ त्यसभन्दा अघि के भएको थियो भन्ने हो । त्यस बेला एउटा प्रयास भयो । कति सफल भयो भएन त्यो अर्कै कुरा भयो ।
१९९८ पछि मुलुक द्वन्द्वमा फस्यो । द्वन्द्व भएपछि आकर्षण हुँदाहुँदै पनि उद्योगी हुँदा हुँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आउन सकेन । त्यसपछि सन् २००६ को नोभेम्बरमा दिल्लीमा सम्झौता भएपछि फेरी उठाउनु पर्‍यो यो क्षेत्र भनियो । अव कसलाई भन्न जाने ? मुखले भनेर त हुँदैन । विज्ञापन गरेर पनि हुँदैन । त्यसैलाई सम्बोधन गर्नका लागि हामीले २०११ मा नेपाल पर्यटन वर्ष भनेर निश्चित गर्‍यौँ । अव कुरा उठ्छ २०११ पछि २०२० को । २०११ को अन्त्यमा दुई वटा निर्णय गर्‍यौँ । हामीले १९९८ र २०११ को अनुभवबाट सिकेर यस्ता राष्ट्रिय अभियानको रूपमा मनाउँदा पर्यटन व्यवसायी र सम्बन्धित निकायको मात्र होइन, अरू व्यक्ति, समूह र समाज पनि मोविलाइज हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्यौं । किनभने पर्यटन व्यवसायीको मात्रै वा सम्बन्धित निकायको मात्रै हुँदो रहेनछ । सामान्य ट्याक्सी ड्राइभरले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने समेत धेरै ठुलो अर्थ राख्छ । त्यसैले हरेक दश वर्षमा पर्यटन वर्ष मनाउने निर्णय त्यस बेला भएको हो । यसको अर्थ पर्यटनसँग सम्बन्धित नभएको निकायहरूले पनि यसको बारेमा सोचोस् भन्ने हो । जस्तै गृह मन्त्रालयले राष्ट्रको सुरक्षा नीति बनाउँदा आफ्नो जनताको मात्र सुरक्षाबारे सोच्ने की थप २० लाख पर्यटकको सुरक्षा बारे पनि सोच्ने भन्ने हो । उनीहरूको पनि सुरक्षा गर्नु पर्‍यो । त्यो सोचियोस् नीतिमा समाहित होस् भनेर नै दश/दश वर्षमा पर्यटन वर्ष मनाउने भन्ने निर्णय गरिएको हो । त्यसका साथै बीचमा तीन/तीन वर्षमा विषयगत रूपमा मनाऔँ भन्ने थियो । त्यसैलाई भिजन २०२० भनेका थियौँ । अहिले दश वर्ष भयो तर बीचको तीन/तीन वर्ष हरायो ।
– नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व कार्यकारी प्रमुख श्रेष्ठसँगको कुराकानीमा आधारित ।